တက်ကျမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » တက်ကျမ်း
Posted by Yin Nyine Nway on Aug 1, 2010 in Short Story | 1 comment
(ဥပမာ) မိန်းမတစ်ယောက်…. အတန်းပညာ များများစားစားမရှ်ိပဲ ယောက်ျားဖြစ်သူ၏ လုပ်ခလစာအပေါ်၌သာမှီခိုစားသောက်ရသည်။ ယောက်ျားဖြစ်သူရုတ်တရက် သေဆုံးသွားသောအခါ မလုပ်တတ်မကိုင်တတ်ဖြင့် ကျန်ခဲ့သည် ။ အခြားသော ဆွေမျိုးသားချင်းများမရှိပေ ။ နောက်ဆုံး ကိုယ်တိုင်အားထုတ်မှုမရှိလျှင်
ထိုဥပမာအရ… မည်သို့လုပ်ရမည်ထက် ဘာကြောင့် လုပ်ရသည်က ပို အရေးကြီးကြောင်း သိသာပေသည် ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့သည် ဘ၀၏ တွန်းကန်အားကိုယူ၍ ဘ၀ကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ကြရမည်ဖြစ်သည်။
မိဘအတွက် ( ရှားပါတယ် ) ( အဟိ )
ရည်းစားအတွက် ( တော်တော်များတယ်ထင်တယ် )(:P )
ငါက ဆင်းရဲလို့ လူရာမသွင်းကြဘူး .. ငါကြိုးစားရမယ် ………အစရှိသဖြင့် …ပေါ့…….
” သတိ်ိ နှင့် ပိုက်ဆံ သည် ပိုသည်ဟူ၍မရှိ ”
သူတစ်ပါးအပေါ်မကောင်းမကြံပါနှင့် ၀ဋ္ဋ်ဆိုတာလည်တတ်တယ်တဲ့ …
အဲဒီစကားက မှန်ချင်လည်းမှန်မယ် ….မမှန်ချင်လည်းမမှန်ဘူး .. ဒါပေမယ့် သေချာတာတစ်ခုက